Tallaabo Cusub oo Loogu Talagalay Wadooyinka 'Menderes Boulevard Traffic' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir53 RizeTallaabo Cusub oo Loogu Talagalay Wadooyinka 'Menderes Boulevard Traffic'
20 / 08 / 2019 53 Rize, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Talaabo cusub ayaa loo qaaday taraafikada boulevard taraafikada
Dowladda Hoose ee Rize waxay sii wadaysaa ka shaqeynta xalka cufnaanta taraafikada ee bartamaha magaalada.
Talaabo cusub waxaa qaaday Dowlada Hoose ee Rize gaar ahaan xalinta ciriiriga taraafikada ee ka dhaca waqtiyada qaar ee maalinta gobolka loo yaqaan Isgoyska Meteler.
Marka la eego baaxadda isku xirnaanta jidadka waaweyn, Dowladda Hoose ee Rize, Wadooyinka Waaweyn iyo Qeybta Booliska ee Gobolka iyadoo la raacayo go'aanka wadajirka ah, ballaarinta wadooyinka soo gala isgoyska ayaa loo sameeyay inay ka shaqeeyaan sidii socodka baabuurtu u yara raaxo badnaan lahaa.
Ballaca wadada ee loo yaqaan Isgoyska Meteler ee Menderes Boulevard wuxuu ahaa mid aan ku filneyn marka loo eego kordhinta tirada gawaarida iyo cufnaanta taraafikada iyo tillaabooyinka lagama maarmaanka ah waxaa qaaday degmada Rize oo leh Agaasinka Guud ee Wadooyinka iyo haad cusub oo lagu daray qeyb ka mid ah isgoyska bartamaha si loo yareeyo socodka taraafikada. Tani iyo wax qabad la mid ah ayaa ku sii socon doona talaabooyin kala duwan oo heerar kala duwan ah howsha, iyadoo tixgelin la siinayo isu socodka magaalada.
Aliağa-Menderes Nidaamka Deegaanka, oo ah tallaabo taariikhi ah oo loo maro waddada Torbalı
Aliağa Menderes Commuter Nidaamkiisu wuxuu kordhinayaa Dalxiiska ee Foqs
Bornova ayaa heshay boodh cusub
Aliaga-Menderes tareenka xawaaraha sare ee tareenka xuddunka ah ayaa gobolka la iman doona mashruucyo cusub!
Wasiirka Gaadiidka Maxamuud Caydiid Menderes ayaa sameeyay sahan ku saabsan dhismaha dhismaha IZBAN
Alparslan Turkes Boulevard ayaa sameeyey Muuqaal Cad
Tallaabada Koowaad ee Hirgelinta Mashruuca Cusub ee Cusub ee Turkiga ayaa laga qaadi doonaa bilawga 2013
Sakarya ayaa qaadaya tillaabooyin cusub oo casri ah gaadiid ku qaadista
Talaabada Koowaad ee Mashruuca Isgaadhsiinta Kabaha
Gaadiidka 'Menderes Boulevard Traffic'